New SADC Chairman calls for the West to lift sanctions against Zimbabwe – Report Focus News
Tanzania president John Magufuli, the new SADC Chairman has appealed to the international community to scrap sanctions against Zimbabwe, saying the country has already opened a new page and is ready to move forward.
Speaking during his maiden acceptance speech after assuming the SADC chairmanship, he said the problems that face Zimbabwe, literally face all countries in the region. “Zimbabwe has been under sanctions for years, but we need the world to understand that when you chop a hand, the whole body gets affected,” he added.
He appealed to the international community to lift sanctions it imposed on Zimbabwe and called for other SADC member states to stand together to make sure that sanctions imposed on Zimbabwe by the West are lifted. President Magufuli said the sanction has not only been hurting Zimbabweans but people from the entire bloc.
“We should unite to support Zimbabwe against sanctions imposed by western countries because they (sanctions) are hurting Zimbabweans and people from across member states,” he said.